FV फाईल एक्सप्लोरर एक साधारण नयाँ फाइल एक्सप्लोरर हो Androidsis
FV फाइल एक्सप्लोरर एक नया, प्रकाश, सरल र शक्तिशाली फाइल एक्सप्लोरर हो
FV फाइल एक्सप्लोरर त्यो लाइटवेट फाइल अन्वेषक बन्न उत्सुक हुन्छ र यो धेरै परमिटहरू आवश्यक पर्दैन। यसले उपकरणको छविहरूमा मात्र पहुँच अनुरोध गर्दछ र बाँकी यसको प्रकाश र शक्तिशाली अनुभवको मजा लिने बाहेक अरू केही हुनेछैन।
धेरै अन्य फाईल अन्वेषकहरू जस्तै, पौराणिक कुल कमांडर जस्तै, चीजहरू सजिलो बनाउँदछ हामीलाई दुई "विन्डोज" खोल्नका लागि सरल तरिकामा फाईलहरूको प्रतिलिपि गर्न र टाँस्न। हामी लगभग भन्न सक्छौं कि हामी हाम्रो फाईलहरूको लागि नयाँ अनुप्रयोग सामना गर्दै छौं जुन भारी नहुने काम गर्दछ र हामीलाई लगभग केहि पनि प्रतिफलको साथ प्रस्ताव गर्दैन।
1 यो फाईल अन्वेषक हो
2 घर FV फाईल एक्स्प्लोररमा तपाईंको तरिका लाई अनुकूलित गर्नुहोस्
3 एक धेरै योग्य फाइल एक्सप्लोरर अनुभव
यो फाईल अन्वेषक हो
सबै समस्याहरूको साथ जुन ES फाइल एक्सप्लोरर, एन्ड्रोइड मा सब भन्दा स्थापित ब्राउजर एक, तपाईंलाई दिने छ, FV फाइल एक्सप्लोरर जस्तै एक अनुप्रयोग खोज्नुहोस्। यो खुशी हो। र यो केवल कतिको राम्रो काम गर्दछ को कारणले मात्र होइन, तर यो घटनाको लागि एक उत्तम दृश्य अनुभव उत्पन्न गर्न सौन्दर्य मा पनि काम गरिएको छ।
हामी १०० भन्दा बढी सुविधाहरूको साथ नयाँ फाईल अन्वेषकको बारेमा कुरा गर्दैछौं जुन कि fooView बाट आउँछ, तर त्यो विशेष "फ्लोटिंग" अनुमतिहरू आवश्यक पर्दैन पुरानो शैलीको प्रबन्धकको रूपमा कार्य गरेर। यद्यपि यो हाम्रो उपकरणमा फाईलहरूको नियन्त्रण र आन्दोलनको लागि पूर्ण रूपमा समर्पित छ, यसले हाम्रो मोबाइलको आन्तरिक मेमोरी कसरी वितरित गरिएको छ वा एन्ड्रोइड प्रणालीको क्लिपबोर्डमा द्रुत पहुँच कसरी जान्ने भनेर जान्न केही विशेष प्रकार्यहरू छन्।
मुख्य स्क्रीनबाट हामी सक्दछौं सबै फाईलहरू पूर्ण रूपमा ह्यान्डल गर्नुहोस् कि हामीसँग हाम्रो मोबाइलमा छ र हामीसँग द्रुत पहुँच, फाईलहरू, संगीत, छविहरू र भिडियो छ। तर के यसले वास्तवमै ठूलो क्षमता दिन्छ भन्ने द्रुत पहुँच बाट मनपर्नेलाई फोल्डरहरू असाइन गर्न FV फाइल एक्सप्लोरर गृह स्क्रिनलाई अनुकूलित गर्ने क्षमता हो।
घर FV फाईल एक्स्प्लोररमा तपाईंको तरिका लाई अनुकूलित गर्नुहोस्
त्यो हो, हामी प्रत्येक अनुभागमा हामी चाहानुहुँदा सबै फोल्डरहरू राख्न घर अनुकूलित गर्न सक्छौं। हामी पनि भण्डारमा पहुँच गर्न नेटवर्क सेक्सनमा नयाँ व्यक्तिहरू थप्न सक्दछौं क्लाउड, FTP, FTPS, SFTP, WebDAV र ल्यान.
यो मात्र होईन, तर शीर्षमा हामीसँग द्रुत खोजीमा पहुँच छ, खुला विन्डोज सेटिंग्स, विषयवस्तु र अधिकको लागि पहिले नै चयनित फोल्डरहरू र ह्यामबर्गर बटनमा पहुँच गर्न।
प्रत्येक सेक्सनमा क्लिक गर्दै, फाइलहरूमा क्लिक गरेर रूट डाइरेक्टरीका साथ यी धेरैजसो अनुप्रयोगहरूका पूर्वनिर्धारित दृश्यमा जानको लागि। र यो यस समयमा हुनेछ जब हामीसँग तल हुनेछ घर र फाईलहरू बीच पार गर्न विकल्प, वा पूर्ण कमाण्डरमा साइड इशारा गर्नुहोस् वा शीर्षमा अवस्थित विन्डोज आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्।
एक धेरै योग्य फाइल एक्सप्लोरर अनुभव
र हामी ती सबै सुविधाहरू मार्फत "डाइविंग" जान सक्दछौं जुन हामीले FV फाईल एक्स्प्लोररमा फेला पारेका छौं। न त यसको आफ्नै छवि र फाइल दर्शकको अभाव छ, वा त्यो फाइलहरू संकुचन गर्न सक्ने क्षमता र त्यो केवल फाईल अन्वेषकमा अपरिहार्य छ कि जसलाई कल भनिन्छ।
अवश्य पनि, प्रत्येक खुला फोल्डरको शीर्षमा छ हामीलाई यो द्वारा प्रयोग गरिएको ठाउँ बारे सूचित गर्दछ। र हामीसँग फाईलहरू हेर्नको लागि अधिक विकल्पहरू छन्, जस्तै सूची वा विवरणहरू, एप्लिकेसनको रूपमा हुन्छ जुन एकदम चाँडो सारिन्छ, एकले ती विकल्पहरू बिर्सन सक्छ।
यसले उही ब्राउजर बीच वेब ब्राउजि includes समावेश गर्दछ र हामी तपाइँलाई लगभग यसलाई प्रयोग गर्न भन्दछौं, पछि उनको अनुभव एक अनुप्रयोग हुन हड्ताल भन्दा बढी हो जो ढिलो भएको भन्न सकिन्छ। यद्यपि विज्ञापन-समर्थित अनुप्रयोगहरूको ब्यारेजको साथ र ती चीजहरू जुन ES फाईल एक्सप्लोरर केटाले हामीलाई सूचित गरेका छन्, यसले धेरैलाई स्थिर अपडेट र समर्थनको साथ समात्ने छ जुन लामो समयसम्म यसलाई जारी राख्छ।
Un सभ्य फाईल एक्सप्लोरर भन्दा बढीलाई FV फाइल एक्सप्लोरर भनिन्छ र यसले हामीलाई आश्चर्यचकित तुल्यायो जुन यो हामीसँग भएको छ। यो गुगल प्ले स्टोरबाट पूर्ण रूपमा नि: शुल्क छ त्यसैले अब तपाईं यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। या त याद नगर्नुहोस् ES फाइल एक्सप्लोररमा यी विकल्पहरू.
FV फाइल एक्सप्लोरर
विकासकर्ता: fooView इंक।
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » एन्ड्रोइड अनुप्रयोगहरू » FV फाइल एक्सप्लोरर एक नया, प्रकाश, सरल र शक्तिशाली फाइल एक्सप्लोरर हो
सामसुले जर्मनीमा एन्ड्रोइड १० को स्थिर संस्करण सुरू गर्‍यो